क्यान्सर प्रतिरोधी फलफूल एवं तरकारीहरु - eKishaan
एन्टिअक्सिडेन्टले शरीरमा हुने अक्सीडेटिव स्ट्रेस कम गरी डि.एन.ए. ड्यमेज हुन दिँदैन र क्यान्सर रोग लाग्न बाट बचाउँछ। अमेरिकन इस्टिट्यूट अफ क्यान्सर रिसर्च का अनुसार ओखरमा कपर, म्यागनेज , म्याग्नेसियम जस्ता सुक्ष्म पोषकतत्वहरु पाइन्छ जुन कयन्सर प्रतिकार छन् । क्यान्सर रोग लागेकोले दैनिक ३० ग्राम ओखर खानुपर्छ ।
२. ग्रीन् टी
ग्रिन टिमा प्रशस्त पोली फेनोल्स एंड फ्लेवोनायड्स जस्ता एन्टिअक्सिडेन्ट पाइन्छ । ग्रिन टिमा पाइने क्याटेचिन्स भन्ने फ्लेवना यड्स लाई क्यान्सर प्रतीकारि तत्व मानिएको छ । ग्रीन टीले कोलन लिवर , ब्रैस्ट प्रोस्ट्रेट मा क्यानसर उत्पन्न हुँदा नदेखिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। ग्रीन टी को नियमित सेवन ले मुत्रथैली ठुलो आन्द्र , पेट प्याङक्रियाज र यसो फेजस को क्यान्सरको जोखिमलाई कम गरेको वैज्ञानिक दाबी छ। धेरै मात्रामा यसको प्रयोग हुँदा यसले अन्य दबाइ सँग प्रतिक्रिया गरी नकारात्मक असर देखाउन सक्छ ।
गोलभेडामा लाइकोपेन भने तत्व पाइन्छ । जनावरहरूमा गरिएको अध्ययनले गोलभेँडाको सेवन ले प्रोस्टेट क्यान्सर बाट बचाउने तथ्य सार्वजनिक भएको छ । विभिन्न प्रयोगशालामा भएका अनुसन्धानले गोलभेडामा पाइने लाइकोपेन र रेड फर्मेली वर्गमा पर्ने तत्वहरूले क्यान्सर रोक थाम गर्न क्यान्सर सेलहरुलाई बढ्न र फैलिन नदिने गर्ने गरेको पाइन्छ ।
लसुनलाई पनि एकप्रकारको क्यान्सर प्रतिरोधी को रुपमा मानिएको पाइन्छ । लसुन एलियम वर्ग अन्तरगत पर्ने तरकारी हो । यस वर्गका तरकारीहरु खासगरी पेट तथा ठुलो आन्द्राको क्यान्सरमा विशेष प्रतिकारी भूमिका खेलेकोअनुसन्धानहरूले जनाएको छ । यस तरकारीमा पाइने तत्वहरूले प्रोस्टेट मूत्राशय , ठूलो आन्द्राको र पेटका ट्युमरको वृद्धिलाई मन्द गरेको र रोकेको प्रमाणहरु पनि जुटिसकेको छन् । लसुनमा पाइने डाईएलाइल डाई सल्फेट भनिने तत्वले छाला,ठुलो आन्द्रा र छालाको क्यान्सर हुन नदिन प्रभावकारी भूमिका निभाएको छ भने यो तत्वले प्रयोगशालामा ल्युकेमियाका कारणले भएको रगतको क्यान्सरका कोषहरुलाई समेत नष्ट पार्ने गर्छ ।
स्याउमा प्रसस्त मात्रामा भिटामिन सी र फाइबर पाइन्छ । यसमा कुरसेटिन , एपीक्यारटेसिन, भन्ने एनथोसाइनिन जस्ता क्यान्सर प्रतिकारी फ्लेभेनोएड हरु पनि पाइन्छ ।
६. ब्रो काउली
ब्रोकाउली र अन्य क्रुसिफेरस तरकारीहरुमा फोलीक एसिड, भिटामिन सी, भिटामिन के , पोटासियम , फाइबर, म्यागनिज,जस्ता तत्वहरु प्रशस्त पाइन्छन् । यसका अलावा बीटा क्याराटिन , पोलीफिनोल्स , एन्थोसैनीन , केम्फेरोल जस्ता तत्वहरू पनि पाईन्छ। यी तत्व हरू विभिन्न तन्तुहरूका क्यान्सरले भएका ट्यूमर बढ्न नदिने र क्यानसर मेरास्त्यासिस रोगमा प्रभावकारी छ ।
दैनिक चेरी खानाले क्यान्सर प्रतिरोधमा ठूलो ठेवा पुर्याउँछ । चेरीना एन्थोसाइनिन, हाइड्रोअक्सीसिन्नामिक एसिड पेरिल्लील अल्कोहल भिटामिन ए, भिटामिन सी र प्रसस्तै फाइबर पाइन्छ ।
आलस को दानामा प्रशस्त मात्रामा म्याग्नेसियम ,म्याननिज , थायमिन , फाइबर , तामा र सेलेनियम जस्ता तत्वहरु पाइन्छ ।यसका अलावा भिटामिन ई, अल्फा (लिनोलेनिक एसिड ) ओमेगा फ्याट जस्ता तत्व पनि पाइन्छ ।
गहुँको जमरामा धेरै क्यान्सर प्रतिरोधी तत्वहरु पाइएका छन् । गहुँको जमराको रसलाई मानव जातिको रगतसँग 40 प्रतिशत मेलखाने जसमा विषाक्तता एवं ठीक सक्ने मूल्यवान बस्तुको रुपमा तुलना पानी गरिन्छ ।
लुंडे , लट्टे ,बेथे चंसुर पालुंगो , मेथी फर्सीको मुन्टा जस्ता हरियो सागपातमा फोलिक एसिड, कोरेटेनाइड र फाइबर पाइन्छ। यी तत्वहरू क्यान्सर प्रतिरोधी तत्वहरु हुन् ।